Maxaa Iska Bedalay Go'aankii Musharraxiinta Ee Guddiyada Doorashada? -...
Maxaa iska bedalay go’aankii musharraxiinta ee guddiyada doorashada? -…
Muqdisho (Wararka Maanta) – Siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ka mid ah xubnaha midowga musharraxiinta mucaaradka ayaa si adag kaga hadlay go’aankii kasoo baxay guddiga uu ra’iisul wasaare Rooble u saaray soo turxaan bixinta xubnaha cabashada laga keenay ee guddiyada doorashooyinka, kadib markii ay soo saareen 34 xubnood oo ka mid ah guddiyadaasi oo gabi ahaanba liiska laga soo saaray.
Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa marka hore shaaca ka qaaday in aan laga talo-gelin xubnaha ay xukuumadda shaacisay ee laga saaray guddiyada doorashooyinka, kuwaas oo ka mid ah xubnaha cabashada laga keenay, walow kuwa kale ay weli ku jiraan guddiyada.
Wararka Maanta : Raysal Wasaaraha Soomaaliya oo magacaabay guddi soo baara xaaladda...
“Hannaanka loo maray turxaanbixinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo dowlad goboleed kama duwana habkii loo magacaabay. Xukuumadda iyadaa guddiyada soo magacaawday, iyadaa go’aansatay iney faafiso magacyada xubnaha tabashada laga qabo, caddeymaha iyada uunbaa heshay ama soo waysay.Ma jirto talo laga geliyey cidii cabashada qabtay, liiskana gudbisay oo ay ugu horreeyaan Midowga Murashaxiinta. Mana cadda hannaanka loo maray turxaan bixinta xubnaha, ayuu yiri CC Shakuur Warsame.
Sidoo kale wuxuu intaasi kusii daray in weli guddiyada doorashooyinka ay ku jiraan xubno ka mid ah hay’adda NISA, gaar ahaan kuwa ka tirsan dharcadda, sida uu hadalka u dhigay.
Wararka Maanta : Faahfaahin: Kulan Muqdisho ku dhexmaray R/W Rooble, Madaxda Galmudug,...
“Waxaan aaminsanahay in inta badan xubnihii NISA ka tirsanaa, gaar ahaan kuwii dharcadda ahaa (Undercover) ay weli si xoog leh guddiyada ugu jiraan,” ayuu raaciyey.
Ugu dambeyn Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa ugu baaqay ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inuu hannaan daah-furan u maro xallinta tabashooyinka jira.
“Waxaan ka codsanaynaa Raysalwasaaraha in uu xallinta tabashooyinka u maro waddo sax ah oo daahfuran, hufnaan iyo dhexdhexaadnimo leh, si ay doorashadu u noqoto mid la isla ogolyahay,” ayuu markale yiri musharrax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur.
Wararka Maanta : Xog: R/W Rooble oo xilal ku abaal mariyey qaar ka mid ah madax gobolee...
Si kastaba, dhawaan ayey aheyd markii xubnaha golaha middowga musharaxiinta ay ra’iisul wasaare Rooble usoo gudbiyeen illaa iyo 67 qof oo ay siyaabo kala duwen uga cabanayeen, kuwaas oo qaarkood la sheegay inay ka tirsan yihiin dhaqaalaha dowladda, ciidanka iyo qaar siyaasisiin ah ama ay ku eedeenayeen in aysan dhexdhexaad aheyn.
Related Topics:bedalayDoorashadaFeaturedgoaankiiguddiyadaiskaMaxaamusharraxiintaWararka Maanta
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ” Ma cadda hannaanka loo maray turxaan bixinta…
Wararka Maanta : Deni oo ku dhowaaqay go'aan ka dhan ah shirkadda DP World - Caasimada ...
Wararka Maanta : Gudoomiyaha Guddigii Xaqiijinta Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka...
Wararka Maanta : Booliska Kenya oo toogtay laba Ruux oo dhac u geystay Haweeney...
Wararka Maanta : Kenya oo sheegtay inay ka hortageyso weerrarada Al-Shabaab - Radio...
Wararka Maanta : DANAB oo Shabaab badan ku dishay weerar ka dhacay Sh/Dhexe - Caasimada...
Wararka Maanta : Afar arrin oo tiirar u ah dib usoo laabashada xiriirka Soomaaliya iyo ...
Wararka Maanta : Deg Deg: Md Farmaajo oo Digniin Culus soo saaray, Go’aanka RW Rooble &...
Wararka Somali12 mins ago